Ninka ugu Taajirsan Shiinaha oo Qasaaray 15 Bilyan oo dollar Saacad gudaheed – Radio Daljir
Ninka ugu Taajirsan Shiinaha oo Qasaaray 15 Bilyan oo dollar Saacad gudaheed
Maajo 23, 2015 12:59 g 0
Sabti, May 23, 2015 (Daljir) — Madaxa Shirkadda Tamarta qaabilsan ee Hanergy Li Hejun ayaa arbacadii la soo dhaafay khasaaray lacag dhan 15-bilyan oo dollar muddo hal saac ah, waxaana shirkaddu ay wajahaysaa hoos u dhac ballaaran oo lagu qiyaasay $18.6 billion oo khasaare ah.
War ka soo baxay shirkadda ayaa lagu sheegay in la hakiyay shayrar muhiim ah oo ay shir-kaddu heli lahayd, iyadoo sidoo kale uu jiro Qandaraasyo wali ka xanniban Hanergy, mana jirto ilaa iyo hadda cid si faah-faahsan uga hadashay khasaarahan lixaadka leh.
Mr. Li oo ah mulkiilaha sheer dhan 80% ayaa ku guul-daraystay inuu soo xaadiro kulankii sanadlaha ahaa oo la qabtay Arbacadii hore, iyadoo shirku furmay xilli hoos loo dhigayay sheerarka sare ee shirkadda Hanergy .
Afhayeen u hadlay Shirkadda ayaa sheegay in Mas\_’uulkan khasaaray uu xilligaas ka qayb-galayay Xaflad ka Dhacaysay Magaalada Bejing oo lagu Daah-furay Mashruuca Tamarta nadiifka ah ,waxaana arintan aad looga hadal hayaa guud ahaan adduunka iyo suuq-yada caalamiga ah.
Khasaarahan ayaa lagu sheegay in ay horseedday bur-bur xoog leh oo soo gaaray suuyqada Caalamiga ah ee Dalka Shiinaha,waxaana shirkadda Bespoke oo ka dhisan New York kana shaqaysa indha-indhaynta hodonnimada ay sheegtay in Hanergy ay wajahday isku dhex-yaac baahsan.
Sidoo kale, Shikadaha Goldin Financil iyo Goldin Properties oo uu Leeyahay Pan Sutong ayaa khasaaray 40% ,waxaana labada shirkadood-ba ay sheegeen in aysan wax fikir ah ka haysan hoos-udhacan soo food saaray.
Ugu dambeyn, si la mid ah Henergy labadaas shirkadood ayaa Sannadihii lasoo dhaafay ku riyaaqayay horumar dhinaca dhaqaalaha ah, waxaana dadka falanqeeya dhaqaalaha ay ka keeneen su’aal suuro-galnimada ay Henergy dib uga soo kaban karto dhaqaale bur-burkan.
DHAGAYSO: Agaasimaha Guud Idaacadda Daljir oo si Adag uga hadlay Xadhiga Shaqaale ka tirsanaa Idaacadda